Waxaa Meelo Kala Duwan ka Dhacay Shirar Lagu Xasuusanayo Dr.Maxamed Sirad Dolal – Rasaasa News
Jan 18, 2010 Dr. Dolal, ONLF
Maanta oo ay ku beegnayd dhimashadii shihiid Dr.Maxamed Siraad Dolal, ayaa waxaa lagu kala qabtay shirar meelo badan oo aduunka ah. Iyada oo lagu xasuusanayo waxqabadkii Dr. Maxamed Sirad Dolal iyo N/hurayaal qaali ahaa oo la dhintay isaga iyo kuwo ka horeeyeyba.
Dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee uu dhabta ka yahay halgnka ay wada Jwxo, ayaa aad uga xumaaday dilkii Dr. Dolal, waxayna dadka qaarkii yidhaahdeen kolba hadii uu Dr. Dolal ka baxay halganki ay waday Jwxo, waa uu soo xidhmay ruux kale oo Eebe u kiciyo ummada mooyee.
Dr. Dolal, waxay dadku aad ugu xusuustaan sida uu daacada uga ahaa halganka ONLF, waxaa lagu asaasay guri uu ku lahaa xaafada Kaasabalbalaadhe [casa de populare], ee magaalada muqdisho August 15, 1984.
Dr.Dolal waligii kama fikirin shaqayso ama tabco, waxaana uu habeen iyo maalinba ku jiri jiray sidii uu wax ugu qaban lahaa halganka ummada Somalida Ogadeeniya. Waxaa uu labadii sanoba mar u tagi jiray N/hurayaasha ku jira jiida hore ee dagaalka isaga oo u gayn jiray dharkiisa iyo kabihiisa iyo wixii lacag ah ee uu ka heli karo qoyskisa iyo ummada Somalida Ogadeeniya. Qalbiga wanaagsan ayaa N/huraha deeqa wadaniguna waa in uu qalbi u hayaa N/hurayaasha Dr. Dolal waxaa uu ahaa ninka kaliya ee ay N/hurayaasha Jwxo kalsoonida ku qabeen.
Waxaana markhaati u ah in Dr. Dolal uu ahaa daladii halganka Ogadeeniya, waxaa maanta oo ay ka soo wareegatay dilkiisii halsano ay xusuustiisii ka dhamaan la,a dahay dadweynaha Somalida Ogadeeniya meel ay joogaanba.
Waxaa yaab ah iyo wax laga naxo in kuwii dilay Dr.Dolal, uusan ku jirin hal ruux oo taariikh leh ama ay ummada Somalida Ogadeeniya ku amaanayso waxqabad. Waxaana ay yihiin kuwo doonaya in uusan halganka Jwxo siisocon taariikhna ka hadhin, daliil waxaa u ah in kii ka dhintaba ay ku farxaan oo ayna jeclayba in taariikhdiisa la sheego.
Arimaha ku saabsan dilkii qarsoonaa ee Dr. Dolal, waxaa dooxay oo munaafaqadii oo dhan soo ban dhigay Xaajo Media Centre. kuwaas oo aanu ka dhigan doono tixraac kola aano soo qaadano qormooyinkii aanu ku saxaynay halganka.
Shirarka iyo xusaaska loo samaynayo Dr. Dolal, waxaanu idiinku soo gudbin doonaa iyaga oo faahfaahsan qoraaladeena kan xiga.